Baxhelekile lisikizi lobulawa komntwana | News24
Baxhelekile lisikizi lobulawa komntwana
Usapho nezihlobo zakwa Gqiba badibene bazokukhunga emva kokuba kufunyenwe umzimba kaAphiwe udunduluzile unamaxeba okuhlatywa kusasa nge Cawe. Ukusuka ekhohlo nguNovuyani Manyamalala. Lindiwe Mdashe, Nomanene Bovela, Nolitha Bovu, Nonkululeko Jaxa kunye Shiela Gqiba ongumama ka Aphiwe. umfanekiso: UNATHI OBOSE
Usapho lakwa Gqiba, eMfuleni, lubongoza abezomthetho ukuba benze umsebenzi wabo ukuqinisekisa ababulali belungu losapho bazamla ngaphaya kwesitshixo zentolongo.
Kudliwano-ndlebe ne City Vision, kulandela ukufunyanwa komzimba wentwazana u-Aphiwe Ggqiba (obeminyaka ili 16) ngentsasa yangeCawa, olu sapho luthe lufuna iimpendulo.
Kubikwa ukuba umzimba wale ntwazana ufunyenwe ulijaja ligazi komnye wemizi kwindawo i-Extension 6.
Ngokwengxelo yosapho, le ntwazana ibinxibe impahla yangaphantsi kuphela, logama umzimba wayo kubikwa ukuba ubuzele amanxeba. Kukholeleka ukuba uhlaselwe ngethuba esuka kwindawo yolonwabo ngentseni yesiganeko.
Othethele usapho, nokwangumntakwabo mfi, uPhumelele Gqiba uthe kukrokreleka ukuba le ntokazi idlwenguliwe phambi kokuba ibulawe. “Ibiligazi nje emzimbeni wakhe, kwaye bekukho nesitena ecaleni kwentloko yakhe nekubonakala ukuba ubethwe ngaso,” utshilo uPhumelele.
Uthe yena wavuswa ngumhlobo wakhe ngentseni ukumazisa ngalo mphanga. “Waye wandithatha wandisa kule ndawo aswelekele kuyo. Xa sifika ndambona edunduluze ngomqolo enganxibanga egqunywe nje ngezantsi kuphela. Zange ndikwazi ukumjonga hlobo eli wayelilo,” uthethe watsho Phumelele.
Umama wale ntwazana uShiela Gqiba, obekhangeleka ekhathazekile emphefumlweni, uthe into ayifunayo kukubona umthetho udlala indima yawo.
“Ndifuna umenzi wobubi avalelwe kwezimnyama izisele angaphinde aphume. Nangoku andikaxoli intliziyo yam ibuhlungu yinto eyenzekileyo emntaneni wam,” utshilo Shiela.
Umchaze u-Aphiwe njengomntwana obenothando nobethanda ukuya ecaweni.
Umelwane uNolitha Bovu uthe bengabahlali basothusiwe sesi siganeko nasichaze njenge ngesiqalayo ukwenzeka kula ndawo. Uthe bengabahlali bazimisele ukuxhasa usapho lakwa Gqiba xa kusiyiwa ezinkundleni zamatyala.
Othethela isitishi samapolisa saseMfuleni November Filander ukungqinile ukuba ixhoba lifunyenwe lihamba ngaze. “Ayikacaci okwangoku ukuba ixhoba lidlwengulwe na. Kodwa ufunyenwe onzakele ngamandla apha entloko. Ngokomkhondo awufumeneyo amapolisa sele kuvalelwe umfana oneminyaka engama 28,”utshilo uFilander.
Woleke ngelithi umrhanelwa uzakuvela kwinkundla ka mantyi yase Blue Downs.